Olee otu esi achọta ezi ọrụ SEO na-eme ka Google nwee obi ụtọ?
Ya mere, anyị ga - elele anya - ọ ga - ekwe omume ịnweta ezigbo ụlọ ọrụ, ụlọ ọrụ nchịkọta zuru ezu, ma ọ bụ onye ọ bụla na - enye SEO ọrụ nlekọta maka otu nzube - Achọrọ m ime ka Google nwee obi ụtọ mgbe niile. Ee, enwere m ajụjụ a n'oge na-adịbeghị anya. E tinyekwara ya n'ụdị dị iche iche, aghaghị m ịnakwere mgbe niile. Na ee, enwere m ezigbo ebe a, ọ dịghị egwu. Ajụjụ ahụ dị ka ihe ijuanya na-eme ka uche zuru okè, òkè ọdụm nke ndị nchịkọta weebụ ndị ahụ ma ọ bụ ndị nwe ebe nrụọrụ weebụ na-eleghara anya na-achọta onwe ha na mkpa dị mkpa maka nkwado dị elu. Ha na-agakarị maka ọkachamara ọkachamara ọkachamara nanị iji mee ngwa ngwa maka ọkwa ha dị elu na ndepụta nke nsonaazụ ọchụchọ. Ma ọ dịghị ihe ọzọ ha kwenyere n'ụzọ ahụ. Ịlaghachi n'ajụjụ mbụ banyere ezigbo SEO ọrụ ndị na-atụ anya ka onye ahụ na-atụ anya ma melite ibe weebụ, naanị ime ka Google nwee obi ụtọ. Eziokwu? Kidding? Ọ dịghị ihe ọ bụla! Arịrịọ ahụ dị iche iche dị ezigbo mma, ọ dịkarịa ala ka anyị mee ihe niile banyere njikarịcha ịchọpụta ọbụna nghọta.
Njikarị nke kachasị mma. Ime ya maka ndị mmadụ ma ọ bụ igwe?
Ihe atọ bụ na nkwado ndabere nke ibe weebụ yana nkwado kwesịrị ekwesị site na ọrụ SEO dị iche iche na-achọ ịmepụta ebe nrụọrụ weebụ gị dị oke ọnụ na enyi-enyi.N'aka nke ọzọ, Otú ọ dị, ọtụtụ ndị na-eleghara ihe a anya mgbe ụfọdụ. Ọzọkwa, mgbe ụfọdụ, ha na-aga iji mee ka ndị na-enweghị isi na-elekwasị anya na ngalaba SEO dị iche iche naanị, n'ihi ya, ha nwere akwụkwọ ha maka ịgụpụta igwe na obi ụtọ. Otú ọ dị, echeghị m nke ahụ. Ya mere, ịchọta SEO na-ahụ maka ọrụ, enwere nghọta ziri ezi n'etiti ahụmahụ onye ọrụ, na "ime ka Google nwee obi ụtọ. "Ma olee otu anyi nwere ike isi chọta ma ihe abuo n'otu oge? Ka anyi gbalịa icheta usoro ihe ndi choro iji choputa ndi choro nyocha nke oma. Maka ezigbo ahụmịhe ọrụ, ihe niile gbasara ya dịkarịrị mfe nghọta. Ma ajụjụ ndị dị aṅaa ka anyị kwesịrị ịrịọ ka anyị kwụọ ndị ọrụ ziri ezi ka ha nwee ike ime ka engines ahụ nwee obi ụtọ n'otu oge? Ka anyi gbalịa lee otua o nwere ike ime.
Tinye ihe mgbaru ọsọ dị mma n'ihu SEO
Cheedị na gị na ndị ọrụ gị niile na-anọdụ ala, yana onye isi gị ma ọ bụ onye ọ bụla ị na-arụ ọrụ. Nri? Mgbe ahụ, ka anyị gbalịa ịmepụta ihe mgbaru ọsọ ndị ịchọrọ ịchọta na ọrụ SEO. Tupu ịmalite, gịnị mere ị ga - achọ ugbu a ịnweta Nchọpụta Nyocha Search maka ọrụ gị ugbu a? Gịnị mere ịchọrọ iji nweta ogo na-arụ ọrụ bụ SERPs maka mkpụrụokwu okwu mkparịta ụka kachasị mkpa karịa nke a? Kedu otu ụzọ ị ga - esi mee ọdịiche dị n'etiti ezi ihe ịga nke ọma ma ọ bụ ọdịda gị dum? Na-eme nke a, n'enweghị echiche dị ka greenie, m na-atụ aro iji atụmatụ dị mfe - ka anyị gbalịa ịtụle ihe mgbaru ọsọ dị mma iji mee ka SEO na-ahụ maka ọrụ, na-ebute ihe mgbaru ọsọ ndị kachasị mma dị ka ihe na-eme n'oge niile.
Ezi ihe mgbaru ọsọ
Achọrọ m inwetakwu okporo ụzọ site na ndị ahụ, ndị nwere mmasị na isiokwu m. M n'aka na ha na-achọ ya. Achọrọ m ebe nrụọrụ weebụ m ga-agwa ndị ọzọ na-eche banyere. Ọ bụ ya mere m ji achọ ụzọ ka ukwuu iji nweta n'ihu ndị na-ege ntị otu ugboro;
Ana m eme ike m niile iji mee ka ụlọ ọrụ ahụ nweta ego. Ndị otu anyị na-agbalị ịme ọganihu na ahịa ọhụrụ. Anyị kwenyere na SEO na-ahụ maka ọrụ bụ nnukwu ọrụ nkwonkwo maka ịkwalite ahịa anyị;
Anyị na-achọ ndị na-ege ntị n'ahịa. Ugbu a, otu anyị na-arụ ọrụ karịa na nkesa dị oke mkpa maka nlele n'efu, ntinye aka, na nbudata n'efu;
Ọ dị anyị mkpa ịmepụta aha ike maka aha ụlọ ọrụ anyị. Anyị nwere ọtụtụ nyocha dị mma, ma ka na-agbakwụnye n'okpuru ụfọdụ ọrịa na-arịa ọrịa ma ọ bụ enweghị nzaghachi. Anyị chọrọ ịkwalite echiche ziri ezi, ma eleghị anya ị ga-ekpochapụ ndị kasị njọ. Dịka anyị maara na ọtụtụ ndị nwere mmasị na aha aha anyị ma ọ bụ ngwaahịa ndị a na-ere.
Ihe mgbaru ọsọ ọjọọ
Ana m achọ okporo ụzọ, nnukwu okporo ụzọ, ọbụna nnukwu okporo ụzọ. Achọrọ m ya na ihe niile, naanị n'ihi na mmadụ niile chọrọ ya, Google ga-achọkwa ya. Nke ahụ ga-abụ mmejọ jọgburu onwe ya, ihe mgbaru ọsọ na-enweghị isi n'onwe ya. A sị ka e kwuwe, ị ga-ekwusi ike na ị nwetara ụfọdụ nchịkọta okporo ụzọ ọchụchọ. Ọ bụrụ na ị na-atụ anya na ị ga-enwe ezigbo ntọghata iji weghachite ego ụlọ ọrụ ahụ, ma ọ̄ bụ ihe yiri ya - ọ dị mma maka gị. Ezi, nke ahụ ga-eme;
Ị na-eche echiche banyere ogo ọchụchọ ka ebipụrụ onwe ya. I kwesịghị itinye ya na ndepụta nke ihe mgbaru ọsọ gị, ọ ga-abụrịrị na ị ga-esi na "lekwasịrị anya" nke dị n'elu. Ugboro, ọ bụ otu ihe ọjọọ maka SEO na-achọ ọrụ. Ihe ka ukwuu, onye ọrụ dị otú ahụ ga-abụ nanị ụyọkọ azụmahịa. Ekwuru m na ọ ga-abụ na ị nwere ike ịhụ ngwa ngwa, ma ka na-ewusi elu na ogo site na usoro aghụghọ, usoro aghụghọ ma ọ bụ, chi na-egbochi, Black Hat SEO na-abịakarị na-ezighị ezi onyinye;
Ụlọ ọrụ gị yiri ka ọ na-etinye aka n'ahịa asọmpi siri ike. E nwekwara otu onye mmegide maka otu okwu okwu okwu ọbụla ịchọrọ ịhapụ ihe ọ bụla. Ikwesiri ikwuputa ya dika ulo oru bu ezi ebumnuche, i ghagharia uzo ozo. I ghaghi ichefu ihe efu dika ihe ndia. Naanị jụọ onwe gị - ọ nwere ike ịlele gị ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ụfọdụ ego ha ga enweta-ma ọ bụ ma ọ dịkarịa ala ogologo ọ bụla ịhazi nzukọ? Ọ bụrụ na ị na-ala azụ, ọbụna ruo nwa oge, nke ahụ abụghị ihe mgbaru ọsọ dị mma;
Ònye bụ onye. Oge ịlele
Ọfọn, anyị ga-egwu akụkụ nke abụọ nke "akụkọ ntụrụndụ" anyị, "dịka okwu na-ekwu okwu na nkwupụta okwu siri ike nke ọbụna ndị na-enweghị aghụghọ na-enweghị ihe jikọrọ ya na SEO ọrụ nlekọta. Ka anyị malite ịkwagharị na nkwubi okwu anyị ma mee nhọrọ - ma na-emeso ndị ahụ ma ọ bụ na-ahapụ ụlọ nzukọ ogbi na obere oge. A sị ka e kwuwe, ekwenyere m na obere akwụkwọ dị n'okpuru nwere ike ịrụ ọrụ nke a.
Nyochaa ngwa ngwa na ndị na-arụ ụka gị, m na-ekwu na ị nwere ike ịmatakwu banyere nghọta na njikarị nke ọchụchọ ha na SEO. Ndị ọkachamara ahụ agaghị enweta ohere, yana ụlọ ọrụ na-adịghị akwụwa aka ọtọ, ma ọ bụ ndị na-enye ọrụ SEO na-achọ ọrụ. Nwee ike ma mee ka ha maa jijiji site n'ịjụ ihe ndị bụ isi, ihe dịka "Hey, naanị m chọrọ ịma otú Google si akwado nsonaazụ ọchụchọ, gịnịkwa ka i nwere ike idozi ha maka m?". Kwesịrị ka mkparịta ụka ahụ ka na-aga n'ihu, n'enweghị ihe ngosi nke ọbụna obere nkụda mmụọ, nke ahụ dị mma. Ihe niile ị chọrọ ịnụ bụ naanị azịza ziri ezi, dịka "Ee, ọ bụ naanị Google, nke a bụ otú o si eme ihe ahụ. Na ebe a bụ otú ndị ọkachamara anyị si mara ụdọ, ma lee otú e si eji otu ọrụ rụọ ọrụ ahụ, ma nke a bụ ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ogologo oge ". Ndi emetie nte ukem ukem ukem ye akpanikọ? Mgbe ahụ, ị ​​nweere onwe gị iji tụlee aka ha maka ime nyocha niile gị, ọbụna na-enweghị echiche nke abụọ Source .